Muxuu ka yiri Valverde guuldaradii niyad-jabka aheyd ay xalay kala kulmeen kooxda Granada?? – Gool FM
(Barcelona) 22 Sebt 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa sheegay inuu dareemayo masuuliyada wixii ka dhacay kulankii xalay guuldarada ka soo gaartay naadiga Granada.
Dhinaca kale Ernesto Valverde ayaa tilmaamay in kooxda reer Catalonia ay si xun ugu ciyaarto meel ka baxsan garoonka Camp Nou, taasina ay ka dhigtay inay lumiyaan dhibco badan dhawaanahan.
Kooxda Granada ayaa guuldaro niyad-jab leh ku baday Barcelona garoonkeeda Los Carmenes, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dlaka Spain.
Haddaba Ernesto Valverde ayaa ciyaarta kaddib u sheegay saxaafada:
“Waxaan dareemayaa mas’uuliyada wixii dhacay, uma qalmin inaan badino, waxaan ku jirnaa kulamada shanaad ee horyaalka La Liga, waana inaan dhamaanteen muujinaa fiicnaan, majiraan wax cudurdaar ah, waa nahay kuwo xun”.
“Granada waa koox soo jiidasho leh, waana inaan garowsanaano arrintaas, waxay aheyd koox adag oo xoog badan, aadna waan ugu hor dhibtoonay, goolka koowaad wuxuu iyaga siiyay kalsooni, wax badan ayeeyna na dhibaateeyeen, qaab ciyaareed fiican ma sameynin”.
“Meelaha ka baxsan garoonkeena ma abuurno fursado badan, waa inaan joognaa heerka ugu sarreeya xilli kasta, wali wax badan ayaa dhiman horyaalka La Liga, waana inaan horumar sameynaa”.
Guushan ay ay Granada ka gaartay kooxda Barcelona ayaa ka dhigtay in horyaalka ay ku hogaamiso 10 dhibcood, halka Barca ay kaalinta 7-aad la fadhiso 7 dhibcood, waana guuldaradii 2-aad ay la kulantay ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.